Inona no lolo kely indrindra any UK? - Ilay lehibe indrindra
Inona no lolo kely indrindra any UK?
Iza no anaran'ny lolo manga kely?
Inona no antsoina hoe lolo kely?
Inona no lolo tsy fahita firy any UK?
Ho kely toy inona ny lolo?
Inona no karazana lolo tsy fahita firy?
Inona no lolo anglisy mahazatra indrindra?
Inona no lolo tsara tarehy indrindra?
Inona no azonao lazaina momba ny lolo?
Inona no lolo mampidi-doza indrindra?
Misy lolo misy poizina ve any Angletera?
Inona no dikan'ny hoe mahita lolo mainty ianao?
Afaka manaikitra anao ve ny lolo?
Milentika ve ny lolo?
Mahafantatra olombelona ve ny lolo?
Ny manga kely dia kely indrindra amin'ny lolo rehetra any UK.
Ny kely manga (Cupido minimus) dia lolo Palearctic ao amin'ny fianakaviana Lycaenidae. Na eo aza ny anarany iraisana, tsy manga io.
Ilay tanora (antsoina hoe nymph) mazàna dia toa olon-dehibe kely nefa tsy manana elatra. Ny lolo, samoina, voangory, lalitra ary tantely dia manana metamorphosis tanteraka. Ny tanora (antsoina hoe larva fa tsy nymph) dia samy hafa be amin'ny olon-dehibe. Matetika koa izy io dia mihinana karazana sakafo isan-karazany.
Butterfly Conservation (BC) dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tetikasa iray hanampiana ny lolo tsy fahita firy any Angletera, ny High Brown Fritillary, ao amin'ny trano mimanda sisa tavela. Voafetra amin'ny tranokala vitsivitsy any Avaratra Andrefana sy Atsimo Andrefana Angletera ary iray any Wales.
Ny lolo dia misy habe manomboka amin'ny 1/8 kely ka hatramin'ny 12cm lehibe. Ny lolo dia mahita mena, maitso ary mavo. Ny olona sasany dia milaza fa rehefa malalaka ny fatorana mainty amin'ny sompanga Woolybear dia tonga ny ririnina mangatsiaka.
Jereo ihany koa Iza ny farihy lalina indrindra any Kanada?
Ny Palos Verdes Blue no lolo tsy fahita indrindra eto an-tany. Heverina ho lany tamingana hatramin'ny 1994, raha nahita mpikaroka tao San Pedro, Kalifornia. Nisy programa fampiroboroboana natomboka ary toa nahomby, saingy mbola misy an-jatony maro any an'ala.
Manga manga: Ity no lolo manga manjaka indrindra any Angletera, raha ny filazan'ny Butterfly Conservation. Ny lahy dia manga, raha ny lokon'ny vehivavy kosa dia miovaova amin'ny volontsôkôlà manontolo ka hatramin'ny manga.
Lolo tsara tarehy 10 tsara indrindra eran'izao tontolo izao
3) Janetta Forester. Miaraka amin'ny fika lehibe metaly manga, maintso, volomboasary na mena, ireo lolo ireo dia avy any Afrika. …
4) lolo Amber Phantom. …
7) lolo Morpho manga. …
Lolo clipper manga. …
9) hatsaran-tarehy manga tandrefana. …
10) Fandidiana vorona.
18 avg. 2015 г.
Ny lolo dia bibikely tsara tarehy sy manidina manana elatra mavesatra be. Toy ny bibikely rehetra, dia manana tongotra enina mifangaro izy ireo, faritra misy vatana 3, antenazy roa, maso matevina ary exoskeleton. Ny faritra telo amin'ny vatana dia ny loha, ny tratra (ny tratra) ary ny kibony (mifarana ny rambony). Voasaron'ny volon'ondry bitika kely ny vatan'ilay lolo.
Jereo ihany koa Iza no mpamokatra entona voajanahary lehibe indrindra eto an-tany?
Antimachus Swallowtail: ny lolo misy poizina indrindra eto an-tany! - Ity lolo ity dia manana elatra 8 ka hatramin'ny 9 santimetatra ary avy any Oganda. Manana poizina ampy amin'ny vatany hamono saka enina izy!
Tsy misy lolo misy poizina ka mahafaty olona na biby goavambe, fa misy samoina afrikanina izay misy poizina be ny ranony fanday. Ny atin'ny N'gwa na ny 'Kaa dia nampiasain'i Bushmen hanapoizina ny tendron'ny zana-tsipìka.
Ny lolo mainty dia mazàna heverina ho tandindon'ny fahantrana sy fambara fahafatesan'ny kolontsaina maro, fa ny hafa kosa dia mariky ny fiovana tsara. Amin'ny kolontsaina maro dia inoana fa ny lolo mainty dia tandindon'ny fifindrana, fanavaozana, na fahaterahana indray.
Tsy manaikitra ny lolo satria tsy afaka. Mandrovina ravina ny sompanga ary mihinana fatratra amin'ny vavany mitsako, ary manaikitra ny sasany amin'izy ireo raha mahatahotra izy ireo. Fa rehefa lasa lolo izy ireo, dia manana proboscis lava lava be ihany, izay toy ny mololo fisotro malefaka - lasa ny valanoranony.
Valiny. Ny osa biby rehetra ao anatin'izany ny bibikely toy ny tantely sy ny vitsika ary ny lolo. Raha manana kibon'ny karazany sy mahitsim-bolo ianao dia hiarina ny gaza noho ny fandevonan-kanina ary voajanahary izy ireo hanjavona. … Ny lolo mpanjaka no “Mpanjakan'ny Farting”.
Biby ara-tsosialy izy ireo ary maniry ho namana, ary noho izany dia mifamatotra mora foana amin'ny olombelona. Ny bibikely dia miasa matetika amin'ny fihetsika voajanahary.
Jereo ihany koa Inona ilay dinôzôro kely indrindra eran'izao tontolo izao?
Fanontaniana: lolo inona no manana elatra lehibe indrindra?
Fanontaniana: Iza ny lolo lehibe indrindra any Kerala?
Ny fanontanianao: Inona no lolo anglisy kely indrindra?
Iza no lolo kely indrindra hita any India?
Iza no lolo kely indrindra any India?
Iza no lolo kely indrindra eto an-tany?
Valiny haingana: Hatraiza ny piramida egyptiana lehibe indrindra?
Inona ny tetezana tranainy indrindra ao Thames?
Karazana bitro inona no manana ny androm-piainany fohy indrindra?
Inona avy ireo biby 10 lehibe indrindra?
Inona avy ny karazana bevohoka lava indrindra?
Inona no lalan'ny hazakazaka mafy indrindra eto amin'izao tontolo izao?
Iza no seranana lehibe indrindra any Eropa?